● Takasikwa USA kunogona customized. Tinogona kuita chero chaunoda
Language: Chirungu / Korean
Kavha: FPP Retail
Microsoft Office 2016 Standard Ireland Original 1User 1SP Installation DVD uye Key Card
Words Key: hofisi 2016 mureza, 2016 mureza,
USA / kong / Singapore / Ireland
Factory chisimbiso Retail bhokisi
100, 000 bv / Month
Microsoft Office 2016 kunokubatsira kuita basa rako zvakanaka - kwese, chero nguva uye munhu. New, shanduro chaiwo pakombiyuta zvikumbiro, Shoko, Excel, PowerPoint, Outlook, uye OneNote, ano Makavakwa pamusoro kunonyanyisa yauinayo. Muenderere nokukurumidza zvibereko magwaro nyanzvi dzomutambo authoring features, magadzirirwo chidhiraivho nokuti Pixel-hwakakwana Layouts uye nzwisisa nematurusi kukubatsira kunyatsoshandisa mashoko enyu. Muenderere kuwana docs ako mugore pose uchida navo. With magwaro enyu kuchengetwa paIndaneti, zviri nyore kuwana chikwata wako papeji chete. Mugove, varipo uye kushanda pamwe mabasa chete yakavakwa chikwata kubatsirana Ezvemutauro mhiri Suite.
Processor: 1 gigahertz (Ghz) ​​kana dzichimhanya x86 kana x64-ikakuruma processor pamwe SSE2
Uchishandisa System: Windows 7 kana kuti gare gare, Windows Server 2008 R2, kana Windows Server 2012
Memory: 1 GB RAM (32 ikakuruma); 2 GB RAM (64 ikakuruma)
Hard dhisiki Space: 3.0 GB iripo dhisiki nzvimbo
Display: 1024 × 576 chisarudzo
Graphics: Graphics Hardware kumhanyisa kunoda DirectX 10 Graphics kadhi
Multi-murove: A mudziyo kubatwa-akwanise kunodiwa kushandisa chero multi-chingakubata functionality. Zvisinei, zvose zvinhu uye functionality nguva iripo nekushandisa keyboard, mbeva, kana zvimwe mureza kana nyore chiyamuro mudziyo. Cherechedza kuti mutsva ikabatwa zvinhu zviri optimized kushandiswa ne Windows 8 kana gare gare.
Zvimwe Zvinodiwa: Internet functionality kunoda Indaneti. Microsoft nhoroondo kunodiwa.